Geldiğini - トルコ語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: geldiğini (トルコ語 - ビルマ語)
သို့သော်လည်း သူ၏ နေ့ရက်အချိန်ရောက်မည် ကို ဘုရားရှင်သိမြင်၍၊ သူ့ကိုပြုံးရယ်တော်မူ၏။
ကင်းစောင့်သည်လည်း၊နှစ်စီးစီ နှစ်စီးစီ ချီလာ သော မြင်းတပ်တတပ်၊ မြည်းတပ်တတပ်၊ ကုလားအုပ် တပ်တတပ်ကို မြင်၍၊ သတိနှင့် စေ့စေ့ကြည့်ရှု နားထောင် ပြီးလျှင်၊
သူလျှိုတို့ကို စေလွှတ်၍ ရှောလုရောက်ကြောင်းကို အတပ်သိ၏။
သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ လူအပေါင်း တို့သည် မစုဝေးဘဲမနေနိုင်ရာ။ သင်ရောက်ကြောင်းကို ကြားသိလိမ့်မည်။
‹‹Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayalım.
Marta İsanın geldiğini duyunca Onu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.
ယေရှုကြွလာတော်မူကြောင်းကို မာသသည်ကြားလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကို ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါသွား၏။
ဘုရားသခင်သည်မောရှ၌ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူကြောင်းကို ငါတို့ သိကြ၏။ ထိုသူသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကို အသိဟုကဲ့ရဲ့၍ ပြောဆိုကြလျှင်၊
‹‹O zaman İnsanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
Düşün ne anlama geldiğini açıklamaları için Babilin bütün bilgelerinin yanıma getirilmesini buyurdum.
ထိုကြောင့်၊ အိပ်မက်အနက်ကို ငါ့အားဘော်ပြ စေခြင်းငှါ၊ ဗာဗုလုန်ပညာရှိအပေါင်းတို့ကို အထံတော်သို့ သွင်းစေဟု ငါအမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊
ပညာရှိ ဆရာတော်အပေါင်းတို့သည် လာ ရောက်ကြသော်လည်း၊ ထိုစာကို မတတ်နိုင်ကြ။ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်ဘုရင်အား မဟောမပြောနိုင်သော ကြောင့်၊
İsa Mesihin beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrıdandır. Tanrının Ruhunu bununla tanıyacaksınız.
ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို အဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟူမူကား၊ လူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာ တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို ဝန်ခံသောဝိညာဉ် မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၏။
Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürünün ezilenleri RABbin sözünün yerine geldiğini anladılar.
ထိုပဋိညာဉ်သည် ထိုနေ့၌ပျက်သောကြောင့်၊ ငါ့ကိုအမှီပြုသော သိုးဆင်းရဲတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားလည်ကြ၏။
ထိုအခါကင်းစောင့်လုလင်သည် မြော်ကြည့်၍၊ မိမိ နောက်၌ တောင်ခြေရင်းလမ်းမှာ လူများလာသည်ကို မြင်၏။
İsanın, Hirodesin yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalimde bulunan Hirodese gönderdi.
ငါဒံယေလသည် ထိုရူပါရုံကို မြင်၍ အနက်ကို ရှာဖွေသောအခါ၊ လူသဏ္ဌာန်ရှိသောသူတဦးသည် ငါ့ရှေ့တွင် ရပ်နေ၏။
ထိုစာကို ဘတ်၍ အနက်ကို ငါ့အား ဘော်ပြစေ ခြင်းငှါ ဗေဒင်တတ်ပညာရှိတို့ကို ငါ့ထံသို့သွင်းသော် လည်း၊ သူတို့သည်အနက်ကို မဘော်မပြနိုင်ကြ။
လူအချို့တို့သည် ငါတို့အခွင့်မရှိဘဲ ငါတို့ထံမှ ထွက်သွား၍၊ သင်တို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံရမည်၊ ပညတ်တရားကိုကျင့်ရမည် ဟူသောစကားဖြင့်၊ သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို နှောင့်ရှက်ဖျက်ဆီးသည်ကို ငါတို့ကြားရ သည်ဖြစ်၍၊
İsa, Babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrıdan çıkıp geldiğini ve Tanrıya döneceğini biliyordu.
ခမည်းတော်သည် အလုံးစုံတို့ကို သူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်း၊ သူသည်ဘုရားသခင့်ထံ တော်မှ ထွက်လာသည်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ကြွသွားမည်ကို၎င်း ယေရှုသည်သိတော်မူသည်နှင့်၊
فیلم سوپر سکسی (マオリ語>英語)menepuk nepuk (マレー語>簡体字中国語)urad ki dal (ヒンズー語>英語)add ignominy (英語>タガログ語)annyeonghaseyo (韓国語>スペイン語)ব্লু ফিল্ম দেশী (ベンガル語>英語)estatua da liberdade (ポルトガル語>英語)friløb (デンマーク語>英語)red herring (英語>ラテン語)deterioraban (スペイン語>簡体字中国語)mujhe aap se ye umeed nahi thi (ヒンズー語>英語)von sua (フランス語>スペイン語)samkodh ko english may kya kehte hai (ヒンズー語>英語)bf full video movie's hindi (ヒンズー語>英語)nakapakighilawas (セブアノ語>タガログ語)vesting order means in bahasa melayu (英語>マレー語)dill seeds (英語>テルグ語)meewerken (オランダ語>フランス語)piazza (ポーランド語>フランス語)hope this helps (英語>ウェールズ語)it's so cool i wish i could do that (英語>ヒンズー語)enggang lalu ranting patah (マレー語>簡体字中国語)ras i curt (カタロニア語>スペイン語)if i had wings i would have flown to you (英語>ヒンズー語)razem (フィンランド語>スウェーデン語)